Taariikhda My Butros » Sidee Cusboonaysii qof ka Park ee Dog
Last updated: Nov. 29 2020 | 2 min akhri
This Bal qiyaas, aad tuurayso sinxi la saaxiibkaa kaamka jooga ee park eey maxalliga ah iyo kuwa aad isku aragto aad saaxiibkiisa Naf iman karta in fogaanshaha. Maxay aad hadda u? From isbarasho ugu horeeyay ee soo xaraystay heshiis ee taariikhda a, waxaan ku soo ururiyeen qaar ka mid ah talooyin ku saabsan sida loo taariikhdana qof ka park eyga.
Tip #1: Bar Dog Trick ah Endearing
Inkastoo dhib ma leh inaad sheegaya in qof walba ee parks eey jecel yahay eeyaha, waxaa jira wax in la lahaa ee eey in ogyahay trick iyafa-istaahilin ah. Adiga oo isticmaalaya amar inconspicuous, idin bari kartaa eey trick ah oo aan kaliya uu xambaarsanyahay, shaqsiyad aad laakiin doono kuwa kale jiidashada.
Tip #2: Ha Dog Play la Dogs Kale
Tusida in eey ma aha oo kaliya jecel eeyaha kale laakiin waxa uu ku riyaaqaa ciyaaro iyaga la dhigaysa aad u fara badan oo loo tegi. Plus haddii aad u hit off, eeyaha aad la filayo in lagu noolaan doonto hoos saqafka isku mid ah iyo mid ka mid ma rabo inuu soo geliyo eey kii aan dadka lala macaamilo. Waxaa fure u ah si aad u hesho eeyaha aad u saaxiibo koowaad.
Tip #3: Ka bilow Wadahadal kumeelgaar ah
Haddii ay maalin qurux badan soo baxay ama xaqiiqada ah in labada eyda aad u ciyaareynaa la mid kale, wada hadal caadi ah kuna garaac ilaa. Waa inta lagu jiro wada hadal this, waxaad ka heli doontaa in dheeraad ah oo ku saabsan qofkan bartaan. Bilow off gaabis ah oo soo arag meeshuu waxay u horseeddaa.
Tip #4: Numbers Exchange Phone ee Date kartoono
Marka aad ah waqtiyo kala duwan dhowr hadlay, weydiiso marka ay caadi ahaan u yimid inuu park eyga. Markaas ayaa soo jeedinaya in aad ku badasho lambarada si la isugu duwo taariikhda kartoono. Taariikhda bilowga ma noqon doonto sidii la maago sidii loo diiradda eeyaha aad.
Tip #5: Fidinta Date Martiqaad a – Dogs No
Marka aad ogaato in ay xiiseyneyso, warsato Gaalada ka soo taariikhda qado. Kulan in ka sii qoto dheer eeyaha goob sans waxay keeni doontaa in wada hadal xitaa qoto dheer, waxaana rajeynayaa in ay keeni doonto in wax ka badan.
Iyadoo talooyinkan, hadda aad si cad u ogtahay wixii aad samayn lahayd marka xiga ee aad arki cutie in ugu park eyga.
Sida loo noqon Date-Sexy Isticmaalka Your Five Dareenka
10 Amarrada Dating Wixii Haweenka
Ma Waxaad Doorashada ayaa Partners Wrong?
Maxaan Sameeyaa On Date A First By Aayad Burji